बाढी प्रभावित जिल्लामा औषधिको चरम संकट - Everest Dainik - News from Nepal
बाढी प्रभावित जिल्लामा औषधिको चरम संकट
२०७४, २ भाद्र शुक्रबार
बाढी प्रभावित तराईका केही जिल्लामा औषधिको चरम संकट देखिएको छ । चितवन, बारा, पर्सा, धनुषा, रौतहट र सर्लाहीका स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधिको अभाव देखिएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौँडाले जनाएको छ ।
यो समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
समाचारमा थप उल्लेख छ- वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले यातायात अवरुद्ध हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि पुर्याउन कठिनाइ भएकाले समस्या निम्तिएको क्षेत्रीय निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए । ‘बाढीले क्षति पुर्याएपछि सर्लाहीका पाँचवटा स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द छन्,’ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ती स्वास्थ्य संस्थामा कार्यारत कर्मचारीहरूसमेत सम्पर्कमा आएका छैनन् । जसले गर्दा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा कठिनाइ देखिएको छ ।’
उनका अनुसार रौतहटका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले जनतालाई सहज ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले भने सेवामा कुनै समस्या नभएको बताएको छ । निर्देशनालयले पूर्व क्षेत्रमा यातायात सुचारु भएकाले औषधिजन्य वस्तुको आयातमा खासै समस्या नदेखिएको बताएको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक डा. विष्णुबहादुर बस्नेतले समस्या निम्तिन नदिन विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए ।
महामारीको अवस्था देखिएको छैनस्वास्थ्य सेवा विभागले बाढी र पहिरो प्रभावित ३० जिल्लाका ८० प्रतिशत जनता महामारीको जोखिममा रहेको बताएको छ । तर, सामान्य बिरामी देखिए पनि महामारीको सम्भावना भने अहिले नरहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले बताए ।
याे पनि पढ्नुस झापामा बाढी र डुबानमा १३ को मृत्यु
‘अहिले बाढीको अवस्था हो, महामारी फैलिसकेको छैन, तर फैलन सक्ने सम्भावना भने उच्च छ । त्यसैले यो समयमा शुद्धपानी र स्वस्थ खाना खानु नै महामारी नियन्त्रणको प्रमुख उपाय हुनेछ,’ उनले भने । पन्तका अनुसार विराटनगर, जनकपुर, रौटहट, सप्तरी र नेपालगन्जमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले महामारी आउन नदिन उच्च निगरानी अपनाएका छन् ।
सर्लाहीमा आवश्यक औषधि नै अभाव सर्लाहीमा बाढी प्रभावित जनतालाई आवश्यक पर्ने औषधिको अभाव भएको छ । केन्द्रले औषधि पठाएको पटक–पटक जानकारी क्षेत्रलाई गराए पनि सम्बन्धित स्थानमा नपुग्दा बिरामीले सेवा पाउन नसकेको डा.पाण्डेले बताए ।
‘बाढी प्रभावित क्षेत्रमा झाडापखालाका बिरामी देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘पानी शुद्धीकरण गर्ने पीयूष ट्याब्लेट, झाडापखाला लागेका बिरामीलाई दिइने रिंगर ल्याक्टेट, जिङ्क ट्याब्लेट, माक्सलगायत अत्यावश्यक औषधिको अभाव छ । केन्द्रबाट दिनमा १० पटकभन्दा बढी फोन आउँछ, तर जनताले मागेको आवश्यक औषधि आउँदैन, यो दुःखद पक्ष हो ।’
दैवीप्रकोपका वेला स्वास्थ्य सेवा दिन छाडेर सम्पर्कबाहिर बस्ने १० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा पर्ने सबै सर्लाहीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी छन् ।
याे पनि पढ्नुस बाढी, पहिरो र डुबानमा ९१ को मृत्यु, २७ हजार जनशक्ति र १३ हेलिकप्टर परिचालन
औषधि अभावको खबर जिल्लाबाट आएको छ : उपमहानिर्देशक
स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चुडामणि भण्डारीले बाढी प्रभावित केही जिल्लाबाट औषधि अभावको खबर आएको जानकारी दिए ।
‘केही जिल्लाबाट आवश्यक औषधिको अभाव भएको भन्ने खबर आएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘कुन जिल्लामा कति औषधि छ, त्यसबारे जानकारी लिँदै छौँ । तत्काल ती जिल्लामा औषधि पुर्याउने छौँ ।’ उनले आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाबाट सामान्य औषधि पठाएको बताउँदै बाँकी औषधि क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट पठाउने बताए ।
तत्काल आवश्यक पर्ने जीवनजल, मेट्रोमिटाजोल पठाउन लागेको जानकारी दिए । सरकारले सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पाँच लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गर्न अधिकार दिएको छ । उनले सर्लाही, चितवन र रौतहटमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव भएको बताए ।
पूर्वाञ्चलमा औषधि अभाव देखिएको छैन
डा. विष्णुबहादुर बस्नेत प्रमुख, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा मातहत सप्तरी, सिरहा, मोरङ, झापा र सुनसरी गरी पाँच जिल्ला छन् । बाढीबाट प्रभावित जनतामा स्वास्थ्य समस्या नदेखियोस् भनेर जिरी हटिया, रामपुरा र कुनौली भन्सारमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।
पूर्वाञ्चलमा कुनै पनि औषधि अभाव देखिएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत धुलिखेल अस्पतालले एक ट्रक आवश्यक औषधि पठाएको छ । अति प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले आवश्यक शिविर सञ्चालन गरिरहेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा चिकन गुनिया, धनुष्टंकार, आउँ, हैजा, झाडापखाला, डेंगुजस्ता रोग देखिन सक्छन्, त्यसैले सबै सचेत बन्नुपर्छ ।
बाढीप्रभावितमा रुघाखोकी र ज्वरो प्रकाशराज शर्मा, फोकल पर्सन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय बाढीका कारण बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेत पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ ।
बाँकेको राप्तीसुनारी र खजारी गाउँपालिकामा धेरै नागरिक प्रभावित भएकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले आवश्यकअनुसार औषधि र पोषण वितरण गरेका छन् । डुबानमा परेका स्वास्थ्यचौकीहरू सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा आउन सक्ने महामारी रोग नियन्त्रणका लागि बाँकेमा २२ सय ३० जना, बर्दियामा २७ सय ३८ जना र दाङमा एक सय ८२ जनालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ । केही बाढी प्रभावित नागरिकमा रुघाखोकी र ज्वरो देखिएको छ । औषधि अभाव हुने सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रबाट औषधि माग गरिएको छ ।